မြို့ကြီးအချို့၏ မိုးလေဝသ အခြေအနေကြည့်ရန်
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး .. လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်မှ အင်အားအလွန်ပြင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး"နာဂစ်"အဆင့်သို့ ရောက်ရှိကာ ကျွန်ုပ်တို့အား မမေ့နိုင်သော သင်္ခဏ်းစာတစ်ရပ်ကို ပေးသွားခဲ့လေသည်။ ဤသို့လျှင် .. သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုးကြီး၏ ဖျက်ဆီးမှုကို ကိုယ်တွေ့ခံစားကြရပြီးနောက် .. အသက်မသေပဲ ကျန်ရစ်သူများနှင့် နောင်လာနောက်သားများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဤ Website ကို တည်ဆောက်လွှင့်တင်ပါသည်။
......... ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းဒေသ အချို့တို့အား အဆင့် (၄) ရှိ အင်အား ပြင်းထန်သော ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း Nargis တိုက်ခတ်အပြီး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မေလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် .....
မြန်မာ့ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သတင်းများ စုဆောင်းဖေါ်ပြခြင်းကို http://mmweather.ning.com အမည်ဖြင့် NING Community Network ၌ .. စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ(၁၈)ရက် တွင် mmweather ၏ သက်တမ်း(၅)နှစ်ပြည့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ NING Community Network တွင် ဆက်လက်တင်ပြရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် http://mmweather.com နှင့် ဆက်စပ်၍ သတင်း website ဖြစ်သော http://blog.mmweather.com တွင် ရာသီဥတုနှင့်သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်းများ၊ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရယူကာ မြန်မာဘာသာသို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြန်ဆိုတင်ပြပေးလျှက် ရှိပါသည်။ Blog နှင့် Main Website များမှ သတင်းအရင်းအမြစ်များကို တစ်နေရာတည်းမှ လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေလေ့လာနိုင်စေရန် MMWeather Portal အား ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် UPDATE ဆက်လုပ်ပေးထားပါသည်
MMWEATHER TEAM မှ အဘယ်ကြောင့် .. ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာသတင်းများအား စုဆောင်း/လေ့လာသည့် website ကို တည်ဆောက်ရပါသနည်း ?
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမကြုံစဘူးကြုံတွေ့ခဲ့ရသော Nargis ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးနှင့် Giri ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးတို့၏ အင်အားပြင်းထန်ပြီး အဖျက်စွမ်းအား ကြီးမားမှုကို အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြရသည့် ပြည်သူလူထုအကြားတွင် အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေမည့် ကောလဟာလ သတင်းများပြန့်နှံ့ခြင်းသည်လည်း ယခုအချိန်အထိ ရှိနေဆဲ/ပြောနေကြဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသတင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်သည့်သတင်းများကို အင်တာနက်(သို့မဟုတ်)online အသုံးပြုသူ ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ မြန်မာများသို့ရည်ရွယ်လျှက် Weather and Disaster Information Collection Network ကို MMWEATHER မှ စတင်တည်ဆောက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်းများကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် လွှင့်တင် ပေးနေသည့် WMO, JTWC, TSR, WEATHER UNDER GROUND (WUND), NOAA, GDACS, T2K, USGS, နှင့် အခြား သေချာတိကျသော သတင်းအခြေအမြစ်များမှ သတင်းများကိုရယူပြီး MMWEATHER ADMIN TEAM အဖွဲ့ဝင်များမှ အချိန်ရလျှင်ရသလို တတ်နိုင်သမျှ ဘာသာပြန်ဆို၍ Blog, MMWEATHER GROUP နှင့် Facebook မှတစ်ဆင့် online ပေါ်မှ မြန်မာများ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီသိရှိနိုင်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
MMWEATHER အား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ကူညီလိုသူ မည်သူကိုမဆို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျှက် ရှိပါသဖြင့် Facebook MMWeather Page, MMweather Group တို့တွင်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးသားခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း
uwinnaing@mmweather.com, mmweather.1958@yahoo.com နှင့် u.winnaing.2008@gmail.com သို့လည်းကောင်း၊ CBOX တွင်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ကူညီနိုင်ကြပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။
Text and page contents updated on 2nd-January-2013 by mmweather administration team
MMWEATHER ဘာတွေလုပ်နေသလဲ ?
MMWEATHER GROUP သည် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ပညာရပ်ကို သင်ယူခဲ့ဖူးသူများ မဟုတ်ကြသည့် မြန်မာများအားလုံးအတွက် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များ၊ မိုးလေဝသ အခြေအနေနှင့် မြစ်ရေကြီးမှု အခြေအနေများကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မှန်ကန်စွာ ရှာဖွေလေ့လာဆန်းစစ်ပြီး -
ရရှိသည့် သတင်းပေါ် အခြေခံ၍ မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှ လွတ်ကင်းအောင် တိမ်းရှောင်တတ်စေရန်
မိမိနှင့် နီးစပ်ခင်မင်သူများကို မိမိရရှိသည့် သတင်းများအား မျှဝေပေးနိုင်ပြီး ၄င်းတို့သည်လည်း မိမိကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းအောင် နည်းလမ်းကြံဆ ရှာဖွေတတ်စေရန်
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒပညာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ (အင်တာနက်ပေါ်မှ တစ်ဆင့်) စုပေါင်းပြီး လေ့လာသုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်
မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းများကို လေ့လာသုံးသတ်တတ်စေရန်
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်စပ်ဆိုင်သည့် မိုးလေဝသအခြေအနေတစ်ခုတည်းသာမကပဲ မြန်မာနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မိုးလေဝသအခြေအနေများကိုပါ အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ လေ့လာတတ်စေရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်မှတစ်ဆင့် စုစည်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
Internet ပေါ်တွင် လေ့လာမှုများမှ ရရှိသည့် မိုးလေဝသအခြေအနေသတင်းများကို post များအဖြစ် ရေးသားတင်ပြခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ သတင်း website များမှ သတင်းများကို ရယူ၍ မြန်မာဘာသာသို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဘာသာပြန်ဆိုတင်ပြခဲ့ပြီး မိုးလေဝသနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တို့အပေါ် စိတ်ဝင်စားသူ လေ့လာလိုက်စားလိုသူများအတွက် ဆက်လက်လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ကြစေရန် အောက်ပါတို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် -
MMWeather ၏ ပင်မ Website http://www.mmweather.com/
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်းအရင်းအမြစ်များကို တစုတစည်းတည်း လေ့လာနိုင်ရန် MMWeather Portal Page
အီးမေးမှတစ်ဆင့် မိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများ အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းများကို ပေးပို့ခြင်း Join Group
မည်သူမဆို လွယ်လင့်တကူပါဝင်ဆွေးနွေးရေးသားနိုင်ရန် ဘလော့တည်ဆောက်ခြင်း View Blog
အသုံးများလာသော လူမှုကွန်ယက်ဆိုက်ဖြစ်သည့် Facebook တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒတို့အပြင် အခြားသော သိမှတ်ဘွယ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သတင်းများကို စုဆောင်းရှာဖွေတင်ပြပေးခြင်း Visit MMWeather Page on Facebook
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို တိုက်ရိုက်(Text chat ပြလုပ်၍) ဆွေးနွေးနိုင်ရန် PAID CBOX
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သတင်းတင်ပြမှု ရပ်တန့်မသွားစေရန် MMWeather Site Data Center ကို သီးခြား Dedicated Server ဝယ်ယူ၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားခြင်း